Ndakakudyisa ivhu rekumakuva – Makuhwa.co.zw
“MURUME wangu uyu ndakanyatsomudyisa! Ndakamubikira sadza kwemazuva matatu akatevedzana randaibika nemvura inevhu randakatora kumakuva emutorwa uko. Akabva amira zvekugara achindirova.” Izvi zvakaudzwa dare raSabhuku Guwa, kwaChinamhora kuDomboshava, nemumwe mukadzi wechidiki weko uyo ari kuti akatumwa nemumwe muporofita kuti apfuhwire murume wake nesadza rakabikwa nevhu rekumakuva kuti apedze dambudziko rekugara achirohwa.
Zvose izvi akazvitaura murume wake aripo.
Portia Shayamunda (32) akamiswa mudare raSabhuku Guwa, pamwe chete nemuporofita wacho, Yeukai Mhembere (38), nemhosva yekutora ivhu kumakuva iro rakasanganiswa nemvura ndokubikirwa murume wake sadza kwemazuva matatu achimupa.
Shayamunda mudzimai waOliver Chigodora Guwa (33) uye Mhembere muporofita wechechi yeCalvery Ministries.
Sabhuku Guwa, VaNelson Guwa (51), ndivo vakatonga vaviri ava svondo rakapera apo vanonzi vose vakabvuma mhosva yavo ndokubvisiswa huku nhatu nembudzi pamunhu mumwe chete izvo zvinodaidzwa kuti “nhendamurandu”.
Nyaya iyi yakazokwidzwa kwaMambo Chinhamora uko iri kutarisirwa kuenderera mberi nekutongwa.
Achitaura, Shayamunda anoti zvekudyisa murume ivhu rekumakuva izano raakapihwa nemuporofita waakatsvaga apo airohwa nemurume wake nguva zhinji.
Nemurume wake Shayamunda vagarisana kwemakore manomwe uye vane vana vaviri vose pamusoro pevatatu vaakaroorwa ainavo kare.
“Upenyu hwangu hwaingova hwekurohwa chete. Ndakazoenda kumuporofita Yeukai Mhembere wechechi yeCalvery Ministries ndokumutaurira dambudziko rangu. Akanditi ndinotora ivhu rekumakuva asiri ehama dzedu izvo ndakaita.
“Ndakanotora ivhu iri masikati kumakuva ekwaChakawa ndokuenda naro akanoriyeresa.
“Akanditi ndinoisa ivhu iri mumvura mubhodhoro re750 ml ndokunditi ndizobikisa mvura yacho sadza rekupa murume wangu kwemazuva matatu akatevedzana izvo ndakaita. Ndakamudyisa zvedi,” Shayamunda akaudza dare.
Mudzimai uyu anoti dambudziko rekurohwa iri rakabva rapera zvinoreva kuti mupfuhwira uyu wakashanda.
“Nyaya yekubatsirwa kwangu ndakazoisvitsa kuna Selina Muzhanje uyo aigarawo achirohwa nemurume wake anonzi Madzudzo Chadambura apo takaenda tose kuhuni achitaura kuti anorohwawo zvakaoma nemurume wake. Ndakamuti aende kune muporofita uyu ononokora ivhu rekumakuva ogadzirirwawo sezvandakaitwa ini obikira murume wake,” mukadzi uyu akaenderera mberi nekudura.
Mai Muzhanje vanonzi vakangonyarara uye havana kushandisa zano iri kumba kwavo.
Nyaya iyi yakazobuda apo Mai Muzhanje vanonzi vakataurira mumwe mudzimai wemunharaunda, Mai Pauline Chakawa (50), vanova vane hama dzine makuva akanonokorwa ivhu.
Chakabva chaputika apo amai ava vakaudza murume wavo, VaAlbert Chakawa (64).
Sabhuku Guwa, VaNelson Guwa (51), vanoti: “Nyaya iyi yabuda kudaro, mukadzi uyu takamushevedza mudare akambotanga nekuramba asi ndokuzobvuma tamudzosa kudare kechipiri. Vose vari vaviri nemuporofita wacho vakabvuma mhosva iyi tikavabvisisa mbudzi nehuku dzekubvuma mhosva.
“Asi nyaya iyi takaikwidza kwaMambo Chinhamora uko vachanopihwa chirango chavo,” vanodaro Sabhuku Guwa.
Vanoti nyaya iyi yakashamisa vakawanda munzvimbo iyi.
VaOliver Guwa (33), avo vakadyiswa sadza rakabikwa nevhu rekumakuva naShayamunda, vanoti vakaregerera mudzimai wavo pakuvapfuhwira uku sezvo ainge “angofurirwawo”.
“Mudzimai wangu ndakamuregerera, akafurirwa nemuporofita uyu. Chandinofarira ndechekuti akabuda pachena akandikumbira ruregerero. Iniwo ndakadzidza kuti mudzimai haarohwe, anoguma aita zvose-zvose saka handicharova mukadzi.
“Ndinoti kune vamwe varume ngavasiyane nekurova madzimai avo, vanotambwa yakapenga sezvandakaitwa ini,” vanodaro.
Vanoti zvichitevera nyaya iyi, vakawana chidzidzo chekuti kurwisana mumba kwakaipa.
“Nenyaya iyi, takashevedza tete vekuMarondera mukadzi wangu akakumbira ruregerero varipo uye ndinoti kuvaridzi vemakuva vekwaChakawa ndine hurombo zvikuru nezvakaitika,” anodaro murume wekupfuhwirwa uyu.
Mai Muzhanje vanoti vakaramba zano ravakapihwa naShayamunda, rekuti vashandisa ivhu rekumakuva semupfuhwira kumurume wavo.
“Ndakapihwa zano iri asi handina kuritevedza apo ndakanotaurira murume wangu pamwe chete nevaridzi vemakuva akatorwa ivhu, vekwaChakawa.
“Izi ndizvo zvakazoita kuti nyaya iyi isvitswe kwasabhuku ikatongwa. Kunyangwe ndairohwa zvangu, hazvikodzera kuti ndishandisire murume wangu mushonga wakadaro, kuuraya munhuka uku!” vanodaro Mai Muzhanje.
“Amai ava (Shayamunda) vakanditi ndishandise muteuro uyu sezvavakaita ivo sezvo vaiti murume wavo akanga atova chitunha chaicho, asisataure kana chinhu.”
Murume waMai Muzhanje, VaMadzudzo Chadambura (36), vanotenda mudzimai wavo nekusatevedza zano iro akanga apihwa rekuti avadyiswe sadza rakabikwa nemvura yakasanganiswa nevhu rekumakuva.
“Ndinotenda mudzimai wangu zvikuru nekuramba zano iri. Asi ndinoti kune vamwe varume ngavasiyane nekurova madzimai, ini handicharova ndakapotsa ndagonekwa sezvo zvichinzi mupfuhwira uyu unoita kuti unyarare zvachose sezvakaita chitunha,” vanodaro.
VaMusekiwa Guwa (54), avo vanova baba VaOliver, vanoti nyaya yakaitika iyi yakavashamisa zvikuru.
“Zvakaitwa nemuroora wangu zvinoratidza kupererwa. Asi ndinoti kuvanhurumewo ngavasiyane nekurwadzisa madzimai,” vanodaro.
VaAlbert Chakawa (64), vane makuva ehama dzavo kwakanotorwa ivhu naShayamunda, vanoti vakashamiswa nechiitiko ichi uye vari kuronga kunokwira dare kwaMambo Chinhamora kuti varipwe naShayamunda pamwe chete nemuporofita Mhembere akamushandira.
“Semhuri, tichagara pasi tokwirawo dare redu tichimhan’arira mudzimai wekutora ivhu uyu nemuporofita wacho. Aya mabasa akashata, zvekare tine makuva anaamai vedu saka zvinotoda kuti tinozivisa kumusha kwavo,” vanodaro VaChakawa.
Mai Pauline Chakawa (50) vanova vakatanga kuziviswa nyaya iyi vanoti zvakaitwa izvi mabasa asingakurudzirwe.
“Semadzimai, ndinoti ngatiregei kupererwa kusvika pakadaro. Ndinokurudzira kuti vabereki VaOliver Guwa vafambe naye nekuda kwesadza raakadyiswa iri,” vanodaro.
Mhembere paakataura nevatori venhau svondo rino ainge osanduka achiti haana mhosva zvisinei nekuti akabvisa zvaidiwa kudare rasabhuku.
“Handina kumbobvira ndapa mukadzi uyu zano rekunotora ivhu rekumakuva. Ehe, akauya kwandiri achida kushandirwa nenyaya yekuti airohwa nemurume wake asi zvevhu handizvizive.
“Ndakamuti mutemo wedomestic violence ndinouziva, ndikati anobatsirwa pamwe chete nemurume wake,” anodaro Mhembere.
“Ini muchechi mangu ndinoporofita chete uye ndiri nhengo yeApostolic Christian Council of Zimbabwe (ACCZ). Ichokwadi vakauya ndikavashandira vari voga.
“Mukadzi uyu hamheno, ndinonzwa kuti akamboenda kwemumwe madzibaba namadzimai vanonamata Saturday, pamwe ndiko kwaakataurirwa kuti anotora ivhu rekumakuva,” anodaro.
Muporofita uyu anoti kudare raSabhuku Guwa akabvuma mhosva iyi achivhundutsirwa asi anobvuma kuti akabvisa mbudzi nehuku nhatu kudare uku.
Zvakadai, VaOliver Guwa vanonzi hunhu hwavo hwakasanduka zvikuru kubva pavanonzi vakadyiswa sadza rakabikwa nemvura yakaiswa ivhu rekumakuva iri uye vanonzi vakatoregereswa basa nemudzimai wavo pamusha pevamwe vanhu pavaishanda munharaunda.
Murume uyu anobvuma nyaya yekuti akatosiya basa asi ndokutadza kupa chikonzero chinogutsa.
Related Topics:Ndakakudyisa ivhu rekumakuva